ny alatsinainy 1 jolay tokony ho tamin’ny 10 ora maraina. Angom-baovao azo tamin’ny olona tsara sitrapo no nahafantarana fa mihaodihaody ao Mahavatsy, ireo mpanakan-dalana. Nidina ifotony ny avy ao amin’ny FIP Toliara hijery ny zava-misy. Vao nahita ireo mpitandro ny filaminana izy dimy lahy dia nirifatra nitsoaka ny telo fa namoaka basy kosa ny iray. Tsy nisalasala ny polisy nitifitra ka lavo ilay jiolahy. Ny iray kosa azo sambo-belona tsy nahetsika raha tafaporitsaka ny telo. Mbola nahitana saron-tava na cagoule tany amin’ilay jiolahy iray azo sambo-belona. Nahazo vahana indray tato ho ato ny fanakanan-dalana tamin’iny faritra atsimon’ny Nosy iny.